Zimbabwe platinum mines to ride out power cuts, gold output less secure - Worldnews.com
Power imports are cushioning platinum mining companies against Zimbabwe's worst blackouts in three years, but gold mines could face production cuts as they continue to rely on an unstable national grid, industry officials said. ...
Harare - Zimbabwe is experiencing its worst power cuts in three years, lasting up to 10 hours daily in some areas and threatening mining output in one of the world's...
HARARA, May 13 (Reuters) - Zimbabwe has started rolling power cuts lasting up to eight hours that will also hit mines, a schedule from the state power utility showed on...
Against the backdrop of severe electricity constraints in Zimbabwe, Anglo American Platinum officially opened a $62m smelter at its Unki mine in that country. The 193,000 ounces a year of platinum group metals (PGMs) mine in southern Zimbabwe built the 8.5MW furnace at the mine to produce matte, a high-value product, from its concentrate that had been sent to SA for processing....
A plan to build Zimbabwe’s biggest platinum mine at a cost of about $4bn is floundering because a military stake in the project has deterred potential backers, according to people familiar with the funding discussions. The African Export-Import Bank has the mandate to raise money for the mine, a joint venture between Russian and Zimbabwean investors. While the bank provided...
Zimbabwe is experiencing its worst power cuts in three years, lasting up to 10 hours daily in some areas and threatening mining output in one of the world's biggest platinum and gold producers. ......
HARARE, May 9 (Reuters) - Zimbabwe's state-owned power utility on Thursday warned it may ration electricity supplies as low water levels reduce output from its biggest hydro plant, while ageing coal-fired generators are shuttered or running at reduced capacity. Power cuts would hit the mining sector -- which contributes more than two thirds of Zimbabwe´s export earnings --...